Izibonelelo zokusebenzisa indawo yeethebhulethi yeeNkqubo zokuThengisa eziVenkile | Martech Zone
NgoLwesibini, Septemba 29, 2015 Douglas Karr
Xa iindawo zentengiso zicinga malunga nenqaku lethebhulethi yokuthengisa, banokucinga ngokutshintsha kwe-POS endala, enkulu, endala abayithengileyo kwiminyaka elishumi eyadlulayo. Kubalulekile ukuba ugcine engqondweni ukuba ithebhulethi ye-POS ayisombululi nje ingxaki yeendleko zehardware, ikwasisixhobo esinezinto ezininzi ezinokuphucula amava okuthenga kumthengi.
Inqaku elihambayo lokuthengisa izixhobo zekhompyutha kunye nesoftware eqikelelweyo ubungakanani yayiyi- $ 2 yezigidigidi ngo-2013- kanye eMntla Melika. Kwaye iipesenti ezingama-70 zabathengisi bajonga iinkqubo zethebhulethi ye-POS ngenxa yokuba ubukhulu bescreen sabo, ukusetyenziswa ngokulula kunye nezinye izinto.
Izixhobo ze-POS zethebhulethi ayisiyokujonga kuphela- zinokusetyenziselwa imisebenzi eyahlukeneyo evenkileni:
Iqhubekeka neentlawulo naphina evenkileni, isusa imigca yokuphuma.
Iqhubekeka neentlawulo naphi na ngaphandle kwevenkile, kwimisitho nakwiindawo.
Iqhubekekisa imbuyekezo ngokulula nangokulula naphi na evenkileni.
Uluhlu lweempahla kunye namaxabiso kuyo yonke ivenkile yabathengi.
Inkqubo yokunyaniseka ukufikelela naphi na, nanini na.
Ukudityaniswa kwe-ecommerce kunye nevenkile yakho ekwi-intanethi. Umthengi wakho angaqala ukuthengisa ekhaya, kwaye ayokuthatha kwindawo yokuthengisa.
Njengoko besitshilo kwisithuba sangaphambili, ukwenza ukuba inkqubo yokuthengisa ibelula kwaye ibe mnandi ngakumbi kubathengi bakho iya kukonyusa ukuthengisa. Iinkqubo ze-POS zethebhulethi ziphambili kwesi sicwangciso.
tags: iinzuzoibluepayinqaku lentengisoposItheyibhile yentengisoIpilisi yeposi
Imveliso yedijithali yokuvelisa: uyintoni umphumo wokugqibela?
Ngomhla wama-21 ku-Disemba 2017 ngo-6: 10 PM
Ndisebenzisa ii-livepos kwivenkile yam kwaye iluncedo kakhulu kwimisebenzi yethu yemihla ngemihla. Wenza umsebenzi wethu ube lula kwaye usindisa ixesha lethu elininzi.
Feb 1, 2018 ngo-5: 34 PM
Kudala sisebenzisa i-livepos kwiminyaka eliqela ngoku kwaye amanqaku abo ancede ekwenzeni umsebenzi wethu ube lula. Iluncedo kakhulu kwaye ithembekile kuthi.